တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် စင်ကာပူ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် Lt. Gen. Perry Lim အား ဂုဏ်ပြုကြိုဆို၊ တွေ့ဆုံဆွေးနွေး » ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်သည် စင်ကာပူတပ်မတော်ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် Lt. Gen. Perry Lim အား ယနေ့မွန်းလွဲပိုင်း တွင် နေပြည်တော်ရှိ ဇေယျာသီရိဗိမာန်ရှေ့၌ ဂုဏ်ပြု တပ်ဖွဲ့ဖြင့်ကြိုဆိုသည်။
ဦးစွာ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့် စင်ကာပူတပ်မတော်ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်တို့သည်ဂုဏ်ပြုတပ်ဖွဲ့ ၏ အလေးပြုခြင်းကိုခံယူကြပြီး ဂုဏ်ပြုတပ်ဖွဲ့ကို လိုက်လံကြည့်ရှုစစ်ဆေးသည်။ ယင်းနောက် စင်ကာပူ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် နှင့် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်တို့သည် အခမ်းအနားတက်ရောက် လာကြသော နှစ်နိုင်ငံတပ်မတော်အရာရှိကြီးများကို အပြန်အလှန်မိတ်ဆက်ပေးကြသည်။
အဆိုပါဂုဏ်ပြုကြိုဆိုပွဲသို့ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့်အတူ ဒုတိယ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်(ကြည်း) ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး စိုးဝင်း၊ ညှိနှိုင်းကွပ်ကဲရေးမှူး(ကြည်း၊ရေ၊လေ) ဗိုလ်ချုပ်ကြီး မြထွန်းဦး၊ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် (ရေ) ဗိုလ်ချုပ်ကြီး တင်အောင်စန်း၊ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်(လေ) ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမောင်မောင်ကျော် နှင့် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံး(ကြည်း)မှ တပ်မတော်အရာရှိကြီးများ တက်ရောက်ကြပြီး စင်ကာပူတပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့်အတူ စင်ကာပူတပ်မတော် စစ်ဘက် လေ့ကျင့်ရေးတက္ကသိုလ် ကျောင်းအုပ်ကြီး Brig. Gen. Chua Boon Keat နှင့်တပ်မတော် အရာရှိကြီးများ၊ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာစင်ကာပူနိုင်ငံစစ်သံမှူး Col. Edmund Tan တို့ တက်ရောက်ကြသည်။
ထို့နောက် စင်ကာပူတပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်သည် ဇေယျာသီရိဗိမာန် ဧည့်သည်တော်မှတ်တမ်း စာအုပ်တွင် မှတ်တမ်းတင်လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့် ဧည့်ခန်းမဆောင်၌ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးကြသည်။
ထိုသို့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရာတွင် ဦးစွာတပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်က မြန်မာ-စင်ကာပူ နှစ်နိုင်ငံသည် မိတ်ဆွေဟောင်း မိတ်ဆွေကောင်းနိုင်ငံများဖြစ်ပြီး နှစ်နိုင်ငံခေါင်း ဆောင်များအဆက်ဆက် ချစ်ကြည် ရင်းနှီးခဲ့သည့်မိတ်ဆွေများဖြစ်ကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဖြစ်ပေါ်ပြောင်းလဲမှုတိုင်းတွင် စင်ကာပူနိုင်ငံအနေဖြင့် မိတ်ဆွေကောင်းပီသစွာ ရပ်တည်ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ကြောင်း၊ ယခုချစ်ကြည်ရေးခရီးစဉ်သည်လည်းနှစ်နိုင်ငံနှင့် နှစ်နိုင်ငံတပ်မတော်နှစ်ရပ်အကြား ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုကိုပိုမိုခိုင်မာစေမည်ဖြစ်ပြီး မိမိတို့တပ်မတော်အနေဖြင့် လည်း ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုကို ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ မိမိစင်ကာပူနိုင်ငံ ခေါင်းဆောင်များနှင့်တွေ့ဆုံခဲ့ချိန်များတွင် မြန်မာနိုင်ငံသူ၊ နိုင်ငံသားများနှင့်ကိုက်ညီသည့် ဒီမိုကရေစီစနစ်ကို သွားရန်အကြံပြုပြောကြားခဲ့ကြောင်း၊ မိမိတို့နိုင်ငံသည်အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံဖြစ်သည့်အတွက် အာဆီယံ လှုပ်ရှားမှုများတွင်လည်း အပြည့်အ၀ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေကြောင်း၊ ၂၀၁၁ ခုနှစ်နောက်ပိုင်း မြန်မာအပါအ၀င် အာဆီယံနိုင်ငံများပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှုများကြောင့် မလက္ကာရေလက်ကြားတွင်ဖြစ်ပွားလျက်ရှိသည့် သင်္ဘော ပြန်ပေးဆွဲမှု၊ အကြမ်းဖက်မှုများ သိသိသာသာလျော့နည်းသွားသည်ကိုတွေ့ရှိရပြီး ဆက်လက်ထိန်းသိမ်း ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်သွားရမည်ဖြစ်ကြောင်းပြောကြားသည်။
ယင်းနောက် ရခိုင်ပြည်နယ်အရေးကိစ္စနှင့်ပတ်သက်ပြီး စင်ကာပူနိုင်ငံက အပြည့်အ၀နားလည်စွာဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံဘက်မှရပ်တည်ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့သည့်အတွက် ကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်း၊ မကြာမီအချိန်ကလည်း မိမိတို့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များကို ARSA အစွန်းရောက် ဘင်္ဂါလီအကြမ်းဖက်သမားများက မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက် ခဲ့ကြောင်း၊ အဆိုပါ ARSA အစွန်းရောက် ဘင်္ဂါလီအကြမ်းဖက်သမားများ၏နောက်ကွယ်တွင်လည်း အခြားနိုင်ငံများ၌ အခြေချလျက်ရှိသည့်အခြားအကြမ်းဖက်အဖွဲ့များရှိနိုင်ကြောင်း၊ ထို့ကြောင့်မိမိတို့အနေဖြင့် အကြမ်းဖက်သမားများ၏ရန်မှ ကာကွယ်နိုင်ရန်အတွက် မိတ်ဆွေနိုင်ငံများနှင့်ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ အခြားနိုင်ငံတချို့တွင်လည်း အလားတူအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုများရှိနေသဖြင့် အလေးထား ဆောင်ရွက်နေရပြီး ယခုထက်ပိုမိုပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်သွားရန်လိုကြောင်း၊ အဆိုပါဘင်္ဂါလီလူမျိုးများသည် မိမိတို့နိုင်ငံ ကိုလိုနီလက်အောက်ကျရောက်ခဲ့ချိန်က ဘင်္ဂလားနယ်မှခေါ်ဆောင်လာသူ များဖြစ်ပြီး တချို့က ၎င်းတို့အားရိုဟင်ဂျာလူမျိုးဟုသုံးနှုံးပြောဆိုနေသည်များရှိကြောင်း၊ သို့သော် ၎င်းတို့သည်ဘင်္ဂလားနယ်မှ မြန်မာနိုင်ငံသို့လာရောက်နေထိုင်သည့် ဘင်္ဂါလီလူမျိုးများသာဖြစ်ပြီး မိမိတို့နိုင်ငံ၏တိုင်းရင်းသားများ မဟုတ်သည့်အတွက် ဘင်္ဂါလီဟုသာ ခေါ်ဆိုရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံမှဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံသို့ အကြောင်း အမျိုးမျိုးဖြင့် ထွက်ခွာသွားသည့် ဘင်္ဂါလီလူမျိုးများအားဥပဒေနှင့်အညီစိစစ်၍ ပြန်လည်လက်ခံသွားရန် ရှိပါကြောင်း ရှင်းလင်းပြောကြားသည်။
ထို့နောက်ဧည့်သည်တော် စင်ကာပူတပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်က အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများဖြစ်သည့် မြန်မာ-စင်ကာပူနှစ်နိုင်ငံတပ်မတော်နှစ်ရပ်ဆက်ဆံမှု သည်နွေးထွေးမှုရှိပါကြောင်း၊ ရခိုင်ပြည်နယ်အရေးနှင့် ပတ်သက်ပြီး တပ်မတော်မှ နိုင်ငံသားများအပေါ် ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုများပေးနေသည်ကို သိရှိနားလည် ပါကြောင်း၊ စင်ကာပူနိုင်ငံအနေဖြင့်လိုအပ်သည့်အကူအညီများကို ပေးအပ်သွားရန် အသင့်ရှိပါကြောင်း၊ မြန်မာ့တပ်မတော်အနေဖြင့် အောင်မြင်စွာဖြေရှင်းနိုင်မည်ဟု ယုံကြည်ပြီး မိမိတို့အနေဖြင့်ဖိအားပေး လုပ်ဆောင်မှုများပြုလုပ်မည်မဟုတ်ကြောင်း၊ အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုများကိုအချိန်မီဖြေရှင်း ဆောင်ရွက်ရမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံ၏နိုင်ငံရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများကိုလည်း အချိန်ယူဆောင်ရွက်သွား ရမည်ဖြစ်ပြီး မိမိတို့နိုင်ငံနှင့်ကိုက်ညီသည့် စနစ်ကိုကျင့်သုံးဆောင်ရွက်ကြရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံ၏ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် ဒေသတွင်းငြိမ်းချမ်းရေးကိုမိမိတို့အနေဖြင့် လိုလားပါကြောင်းပြန်လည်ဆွေးနွေးပြောကြားသည်။
ထို့နောက် နှစ်နိုင်ငံတပ်မတော်နှစ်ရပ်အကြားချစ်ကြည်ရေးခရီးစဉ်များ အပြန်အလှန်လည်ပတ်မှု၊ စင်ကာပူ နိုင်ငံသို့ မြန်မာ့တပ်မတော်မှသင်တန်းသားအရာရှိများ စေလွှတ်မှုနှင့် တပ်မတော်နှစ်ရပ်အကြားပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှုတိုးမြှင့်ဆောင်ရွက်ရေး ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များအား ရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာအမြင်ချင်း ဖလှယ်ဆွေးနွေး ခဲ့ကြသည်။
တွေ့ဆုံပွဲအပြီးတွင် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့် စင်ကာပူတပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်တို့သည် အမှတ်တရလက်ဆောင်ပစ္စည်းများ အပြန်အလှန် ပေးအပ်ခဲ့ကြသည်။
တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ ဗိုလျခြုပျမှူးကွီး မငျးအောငျလှိုငျသညျ စငျကာပူတပျမတျောကာကှယျရေး ဦးစီးခြုပျ Lt. Gen. Perry Lim အား ယနမှေ့နျးလှဲပိုငျး တှငျ နပွေညျတျောရှိ ဇယြောသီရိဗိမာနျရှေ့၌ ဂုဏျပွု တပျဖှဲ့ဖွငျ့ကွိုဆိုသညျ။
ဦးစှာ တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျနှငျ့ စငျကာပူတပျမတျောကာကှယျရေး ဦးစီးခြုပျတို့သညျဂုဏျပွုတပျဖှဲ့ ၏ အလေးပွုခွငျးကိုခံယူကွပွီး ဂုဏျပွုတပျဖှဲ့ကို လိုကျလံကွညျ့ရှုစဈဆေးသညျ။ ယငျးနောကျ စငျကာပူ တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ နှငျ့ တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျတို့သညျ အခမျးအနားတကျရောကျ လာကွသော နှဈနိုငျငံတပျမတျောအရာရှိကွီးမြားကို အပွနျအလှနျမိတျဆကျပေးကွသညျ။
အဆိုပါဂုဏျပွုကွိုဆိုပှဲသို့ တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျနှငျ့အတူ ဒုတိယ တပျမတျောကာကှယျရေး ဦးစီးခြုပျ ကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ(ကွညျး) ဒုတိယဗိုလျခြုပျမှူးကွီး စိုးဝငျး၊ ညှိနှိုငျးကှပျကဲရေးမှူး(ကွညျး၊ရေ၊လေ) ဗိုလျခြုပျကွီး မွထှနျးဦး၊ ကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ (ရေ) ဗိုလျခြုပျကွီး တငျအောငျစနျး၊ ကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ(လေ) ဗိုလျခြုပျကွီးမောငျမောငျကြျော နှငျ့ ကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျရုံး(ကွညျး)မှ တပျမတျောအရာရှိကွီးမြား တကျရောကျကွပွီး စငျကာပူတပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျနှငျ့အတူ စငျကာပူတပျမတျော စဈဘကျ လကေ့ငျြ့ရေးတက်ကသိုလျ ကြောငျးအုပျကွီး Brig. Gen. Chua Boon Keat နှငျ့တပျမတျော အရာရှိကွီးမြား၊ မွနျမာနိုငျငံဆိုငျရာစငျကာပူနိုငျငံစဈသံမှူး Col. Edmund Tan တို့ တကျရောကျကွသညျ။
ထို့နောကျ စငျကာပူတပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျသညျ ဇယြောသီရိဗိမာနျ ဧညျ့သညျတျောမှတျတမျး စာအုပျတှငျ မှတျတမျးတငျလကျမှတျရေးထိုးပွီး တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျနှငျ့ ဧညျ့ခနျးမဆောငျ၌ တှဆေုံ့ဆှေးနှေးကွသညျ။
ထိုသို့တှဆေုံ့ဆှေးနှေးရာတှငျ ဦးစှာတပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျက မွနျမာ-စငျကာပူ နှဈနိုငျငံသညျ မိတျဆှဟေောငျး မိတျဆှကေောငျးနိုငျငံမြားဖွဈပွီး နှဈနိုငျငံခေါငျး ဆောငျမြားအဆကျဆကျ ခဈြကွညျ ရငျးနှီးခဲ့သညျ့မိတျဆှမြေားဖွဈကွောငျး၊ မွနျမာနိုငျငံ၏ ဖွဈပျေါပွောငျးလဲမှုတိုငျးတှငျ စငျကာပူနိုငျငံအနဖွေငျ့ မိတျဆှကေောငျးပီသစှာ ရပျတညျဆောငျရှကျပေးခဲ့ကွောငျး၊ ယခုခဈြကွညျရေးခရီးစဉျသညျလညျးနှဈနိုငျငံနှငျ့ နှဈနိုငျငံတပျမတျောနှဈရပျအကွား ခဈြကွညျရငျးနှီးမှုကိုပိုမိုခိုငျမာစမေညျဖွဈပွီး မိမိတို့တပျမတျောအနဖွေငျ့ လညျး ခဈြကွညျရငျးနှီးမှုကို ဆကျလကျထိနျးသိမျးဆောငျရှကျသှားမညျဖွဈကွောငျး၊ မိမိစငျကာပူနိုငျငံ ခေါငျးဆောငျမြားနှငျ့တှဆေုံ့ခဲ့ခြိနျမြားတှငျ မွနျမာနိုငျငံသူ၊ နိုငျငံသားမြားနှငျ့ကိုကျညီသညျ့ ဒီမိုကရစေီစနဈကို သှားရနျအကွံပွုပွောကွားခဲ့ကွောငျး၊ မိမိတို့နိုငျငံသညျအာဆီယံအဖှဲ့ဝငျနိုငျငံဖွဈသညျ့အတှကျ အာဆီယံ လှုပျရှားမှုမြားတှငျလညျး အပွညျ့အဝပူးပေါငျးဆောငျရှကျနကွေောငျး၊ ၂၀၁၁ ခုနှဈနောကျပိုငျး မွနျမာအပါအဝငျ အာဆီယံနိုငျငံမြားပူးပေါငျး ဆောငျရှကျမှုမြားကွောငျ့ မလက်ကာရလေကျကွားတှငျဖွဈပှားလကျြရှိသညျ့ သင်ျဘော ပွနျပေးဆှဲမှု၊ အကွမျးဖကျမှုမြား သိသိသာသာလြော့နညျးသှားသညျကိုတှရှေိ့ရပွီး ဆကျလကျထိနျးသိမျး ပူးပေါငျး ဆောငျရှကျသှားရမညျဖွဈကွောငျးပွောကွားသညျ။
ယငျးနောကျ ရခိုငျပွညျနယျအရေးကိစ်စနှငျ့ပတျသကျပွီး စငျကာပူနိုငျငံက အပွညျ့အဝနားလညျစှာဖွငျ့ မွနျမာနိုငျငံဘကျမှရပျတညျဆောငျရှကျပေးခဲ့သညျ့အတှကျ ကြေးဇူးတငျရှိကွောငျး၊ မကွာမီအခြိနျကလညျး မိမိတို့လုံခွုံရေးတပျဖှဲ့ဝငျမြားကို ARSA အစှနျးရောကျ ဘင်ျဂါလီအကွမျးဖကျသမားမြားက မိုငျးဆှဲတိုကျခိုကျ ခဲ့ကွောငျး၊ အဆိုပါ ARSA အစှနျးရောကျ ဘင်ျဂါလီအကွမျးဖကျသမားမြား၏နောကျကှယျတှငျလညျး အခွားနိုငျငံမြား၌ အခွခေလြကျြရှိသညျ့အခွားအကွမျးဖကျအဖှဲ့မြားရှိနိုငျကွောငျး၊ ထို့ကွောငျ့မိမိတို့အနဖွေငျ့ အကွမျးဖကျသမားမြား၏ရနျမှ ကာကှယျနိုငျရနျအတှကျ မိတျဆှနေိုငျငံမြားနှငျ့ပူးပေါငျး ဆောငျရှကျသှားမညျ ဖွဈကွောငျး၊ အခွားနိုငျငံတခြို့တှငျလညျး အလားတူအကွမျးဖကျတိုကျခိုကျမှုမြားရှိနသေဖွငျ့ အလေးထား ဆောငျရှကျနရေပွီး ယခုထကျပိုမိုပူးပေါငျး ဆောငျရှကျသှားရနျလိုကွောငျး၊ အဆိုပါဘင်ျဂါလီလူမြိုးမြားသညျ မိမိတို့နိုငျငံ ကိုလိုနီလကျအောကျကရြောကျခဲ့ခြိနျက ဘင်ျဂလားနယျမှချေါဆောငျလာသူ မြားဖွဈပွီး တခြို့က ၎င်းငျးတို့အားရိုဟငျဂြာလူမြိုးဟုသုံးနှုံးပွောဆိုနသေညျမြားရှိကွောငျး၊ သို့သျော ၎င်းငျးတို့သညျဘင်ျဂလားနယျမှ မွနျမာနိုငျငံသို့လာရောကျနထေိုငျသညျ့ ဘင်ျဂါလီလူမြိုးမြားသာဖွဈပွီး မိမိတို့နိုငျငံ၏တိုငျးရငျးသားမြား မဟုတျသညျ့အတှကျ ဘင်ျဂါလီဟုသာ ချေါဆိုရမညျဖွဈကွောငျး၊ မွနျမာနိုငျငံမှဘင်ျဂလားဒရှေျ့နိုငျငံသို့ အကွောငျး အမြိုးမြိုးဖွငျ့ ထှကျခှာသှားသညျ့ ဘင်ျဂါလီလူမြိုးမြားအားဥပဒနှေငျ့အညီစိစဈ၍ ပွနျလညျလကျခံသှားရနျ ရှိပါကွောငျး ရှငျးလငျးပွောကွားသညျ။
ထို့နောကျဧညျ့သညျတျော စငျကာပူတပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျက အာဆီယံအဖှဲ့ဝငျနိုငျငံမြားဖွဈသညျ့ မွနျမာ-စငျကာပူနှဈနိုငျငံတပျမတျောနှဈရပျဆကျဆံမှု သညျနှေးထှေးမှုရှိပါကွောငျး၊ ရခိုငျပွညျနယျအရေးနှငျ့ ပတျသကျပွီး တပျမတျောမှ နိုငျငံသားမြားအပျေါ ကာကှယျစောငျ့ရှောကျမှုမြားပေးနသေညျကို သိရှိနားလညျ ပါကွောငျး၊ စငျကာပူနိုငျငံအနဖွေငျ့လိုအပျသညျ့အကူအညီမြားကို ပေးအပျသှားရနျ အသငျ့ရှိပါကွောငျး၊ မွနျမာ့တပျမတျောအနဖွေငျ့ အောငျမွငျစှာဖွရှေငျးနိုငျမညျဟု ယုံကွညျပွီး မိမိတို့အနဖွေငျ့ဖိအားပေး လုပျဆောငျမှုမြားပွုလုပျမညျမဟုတျကွောငျး၊ အကွမျးဖကျတိုကျခိုကျမှုမြားကိုအခြိနျမီဖွရှေငျး ဆောငျရှကျရမညျ ဖွဈကွောငျး၊ မွနျမာနိုငျငံ၏နိုငျငံရေးပွုပွငျပွောငျးလဲမှုမြားကိုလညျး အခြိနျယူဆောငျရှကျသှား ရမညျဖွဈပွီး မိမိတို့နိုငျငံနှငျ့ကိုကျညီသညျ့ စနဈကိုကငျြ့သုံးဆောငျရှကျကွရမညျဖွဈကွောငျး၊ မွနျမာနိုငျငံ၏ငွိမျးခမျြးရေးနှငျ့ ဒသေတှငျးငွိမျးခမျြးရေးကိုမိမိတို့အနဖွေငျ့ လိုလားပါကွောငျးပွနျလညျဆှေးနှေးပွောကွားသညျ။
ထို့နောကျ နှဈနိုငျငံတပျမတျောနှဈရပျအကွားခဈြကွညျရေးခရီးစဉျမြား အပွနျအလှနျလညျပတျမှု၊ စငျကာပူ နိုငျငံသို့ မွနျမာ့တပျမတျောမှသငျတနျးသားအရာရှိမြား စလှေတျမှုနှငျ့ တပျမတျောနှဈရပျအကွားပူးပေါငျး ဆောငျရှကျမှုတိုးမွှငျ့ဆောငျရှကျရေး ဆိုငျရာကိစ်စရပျမြားအား ရငျးနှီးပှငျ့လငျးစှာအမွငျခငျြး ဖလှယျဆှေးနှေး ခဲ့ကွသညျ။
တှဆေုံ့ပှဲအပွီးတှငျ တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျနှငျ့ စငျကာပူတပျမတျော ကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျတို့သညျ အမှတျတရလကျဆောငျပစ်စညျးမြား အပွနျအလှနျ ပေးအပျခဲ့ကွသညျ။